Amerika: Valin-kafatry ny faritra manoloana ny otrik’aretina H1N1 · Global Voices teny Malagasy
Amerika: Valin-kafatry ny faritra manoloana ny otrik'aretina H1N1
Voadika ny 06 Mey 2009 17:16 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, 繁體中文, 简体中文, македонски, English
Na dia tany Meksika aza no nisy ny foiben’ny fihanahan’ny otrik’aretina H1N1 , mitady làlana hisorohana sy hanoherana azy ireo firenena hafa manodidina. Mijery akaiky amin’izay ataon’ny governemanta any aminy ireo mpitoraka blaogy ny amin’ny fomba hanalan’izy ireo ny tahotra, sa kosa vao mainka manampy trotraka. Ireo mpitoraka blaogy hafa avy any Amerika Latina koa dia mandinika ny fitondran-tenan’ireo olom-pirenena namany, indraindray miaraka amina fampihomehezana kely mba hisian’ny fitonitoniana.
Noho io valan’aretina io dia betsaka ny hetsika sy laminasa, izay heverina hisintona vahoaka maro, no nofoanana na no nahemotra, toy izany ny Hetsiky ny Rivo-Baovao nomanina hatao ny 23 aprily hatramin’ny 3 may tany amin’ilay tanàna meksikana Ecatepec. Ilay mpitoraka blaogy avy any Goatemala, Alan Mills ao amin’ny Revólver [es] dia nila nitady tetikasa hafa, satria efa niomana ny hanatrika io hetsika io izy.
Sarin’ny ‘metro’ meksikana nalain’i Eneas ary nampiasana ny Creative Commons license http://www.flickr.com/photos/eneas/3471986083/
Olom-pirenena maro no mandalina ny fanapahan-kevitra noraisin’ny governemantany manoloana ny fahatsiarovan-tenan’ny mponina amin’ny mety hahatongavan’ny otrik’aretina ao amin’ny fireneny. Any Costa Rica, izay firenena faharoa tao an-toerana nitatitra tranga, dia manoratra i Hazel Feigenblatt avy ao amin’ny Quien Paga Manda [es] fa hoe ny Minisitry ny fahasalamana dia manasazy ireo fivarotam-panafody izay mitady hanararaotra amin’ny fanamboarana fanafody sy vaksiny sandoka. Manontany tena momba ilay fividianana Tamiflu 150,000 fatra nataona firenena izay mbola tsy nahita akory ilay otrik’aretina ilay mpitoraka blaogy Ekoatoriana avy ao amin’ny Dejálo Ser [es] ary koa raha hoe hoverivery fotsiny ilay vola raha tsy ho ampiasaina akory ireo fanafody ka havela ho lany andro ao fotsiny.
I Luis Aguirre avy ao amin’ny Bloodyhell [es] dia mitsikera ny fihetsiky ny Minisitry ny fahasalamana peroviana, izay nilaza fa nisy teratany avy any Arzantina mitondra ny otrik’aretina H1N1 niditra tao amin’ny fireneny, nefa taorian’ny fitsirihana dia voaporofo fa diso izany [es]. Na izany aza, fahafaham-baraka toa rano raraka tsy azo raofina satria efa navoakan’ny governemanta koa ny anaran’ilay olona nahiana hitondra ny otrik’aretina [es], izay zavatra tsy fanao any amin’ny firenena hafa.
Sarina mpizahatany tao Cancún nalain’i El Enigma ary nampiasana ny Creative Commons http://www.flickr.com/photos/marca-pasos/3494017972/
Resahina matetika any anaty blaogy koa ny fihetsiky ny olona manodidina azy ireo. Any Bolivia, vao haingana i Azael avy ao Abre Los Ojos [es] no nifanena tamina fiara nitondra olona efatra nanao sarom-bava tany amin’ny tanànan’i La Paz. Raha ny fantatra dia tsy mbola tonga any Bolivia ny otrik’aretina, nefa manamarika izy fa tsy nanao zavatra hafa tena tsotra ireo olona ireo mba hisorohana loza hafa, “Ny tena zava-tsarotra dia ny mitady olona mamatotra ny fehikibo fiarovany any anaty fiarany.”
Mitantara andro iray izay tena nandreraka lany tany anaty fitanteram-bahoaka i Velvet avy ao amin’ny Piso Tres [es]any Medellín, Kolombia, noho ny fihetsiky ny olona nanodidina azy.
Izaho mantsy tsy mahazaka fofona mahery. Raha mifoaka fofon-dranomanitra mahery be aho dia mievina avy hatrany. Evina tahaka ny evina rehetra, tsy mahafaty, fa manamaivana sy mamela fahafinaretana. Tsy misy hidirany amin’ny gripan-kisoa mihitsy. Mazava ho azy fa tsy mahafantatra izany ireo tafara-dàlana tamiko tao amin’ny “metro”.
Tsy maintsy nievina aho androany noho ny fofon-dranomanitra ratsy be nofohako tao amin’ny ‘métro’. Nijery ahy tamin-katezerana fatratra ilay rangahy teo anoloako. Nisy zazakely iray nijery ny reniny toy ireny fikerin’ny maritiora ireny ary namihina ny tongony. Dia nijery ahy ilay ramatoa, tahaka ny te-hiantsoantso hoe “mpamono olona!” ireny ary avy eo izy nandeha. Nitsangana ilay tovovavy teo anilako – izy no tompon’andraikitra tamin’ilay eviko tsara be teo – ary nifindra fiara. Nisy rangahy hafa koa naka mosoara tany am-paosy aorinany dia nanapina ny orony sy ny vavany. Tao anatin’ny 30 segondra, nisy faribolana tsy hita maso niforona nanodidina ahy ary nahatsapa ny tsapan’ny boka na Indiana pariah aho.
Ny sasany indray dia miezaka mampiasa fampihomehezana mba hanamaivanana ny tahotra. Nanoratra momba ny ‘sary vaovaon’ny fahafatesana’ i Gandica avy any Venezoela ary maka sary an-tsaina ny mety ho endriky ny fanadihadiana any an-danitra momba ny antony nahafaty ny tena [es]:
- Ary inona no nahafaty anao?
Ity no mety ho valiny marina:
– noho ny otrik’aretina AH1N1
Tandremo ny manao fahadisoana goavana amin’ny fitenenana hoe gripa na gripan-kisoa – efa fantatrao ny AH1N1 – gripa vaovao / H1N1 – satria mora tohina ny orinasa momba ny kisoa ary nangataka ny mba hanovàna ny anarana.
‘Lety eee. Ohatran’ny dia efa hoe manan-danja be ireny ny anaran’ilay gripa amin’izao fotoana izao. Izany no hadalàn’ny olombelona, miasa saina foana amin’ny endrika ivelan’ny tena sy ny fifandraisana aman’olona!
Mamoaka karazan-torohevitra nofinofyCiencia Ficción [es] any Costa Rican mamaly ireo mpamaky voakasiky ny otrik’aretina.
Mieritreritra ve ianao fa ho faty aho? Tsy mitonona anarana, San José (renivohitra)
Valiny/: Noho ny gripa, tsia…noho ny fanafihana mitam-piadina any San José, eny.